10 Dabaqadaha ugu Quruxda badan Adduunka oo dhan | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 10 Dabaqadaha ugu Quruxda badan Adduunka oo dhan
Tareen safarka Shiinaha, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareen Safarka Japan, Tareen safarka Ruushka, Tareenka Safarka Isbaanishka, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, Tareen Safarka USA, safarka Europe
Cirka u kacaya, kuwan soo socda 10 Dhismooyinka dhaadheer ee ugu quruxda badan adduunka oo dhan waa farshaxannada naqshadeeyayaasha adduunka ugu fiican. Isku dhafka walxaha mustaqbalka, sifooyin waara oo cagaar ah, kuwan 10 Dhismayaasha quruxda badan ayaa sidoo kale ah qaar ka mid ah calaamadaha ugu booqashada badan adduunka oo dhan.
1. Dabaqadaha ugu Quruxda badan Adduunka oo dhan: Shard The
306 mitir dheer, munaaradda Shard waa dhismaha ugu caansan London. Iyadoo daawashada ugu fiican London, waxaad ka arki kartaa cirifka quruxda badan ee magaalada laga soo bilaabo saqafka sare ee sare. Madasha daawashada waa 244 mitir waxayna soo bandhigtaa aragtiyo ku dhawaad ​​​​dhammaan gees kasta oo London ah.
lagu furay 2003, Shard ayaa soo jiidata booqdayaasha adduunka oo dhan. Inta badan sababtoo ah naqshadda naqshadeed ee gaarka ah ayaa ka dhex taagan dhammaan dhismayaasha dhaadheer ee adduunka. Naqshadaynta Shard waxay ka kooban tahay qaybo quraarad ah waxaana loo qaabeeyey sida muraayadda muraayadda, waxaa jira 11,000 muraayadaha muraayadaha ee dhismaha Shard. Sidaas, marka London ay mudan tahay in la booqdo, oo ay weheliso casho yaab leh oo gabbaldhac ah oo ka dhacay makhaayadaha Shard ee dabaqyada ah 31-33, ugu sarreeya UK.
2. Dabaqadaha ugu Quruxda badan Adduunka oo dhan: Evolution Tower Moscow
246 mitir dheer, Tower Evolution ee Moscow waa mid ka mid ah dhismayaasha dhaadheer ee ugu xiisaha badan adduunka. Guryaha quruxda badan ee quruxda badani waxay xukumaan degmada ganacsiga ee Moscow ee magaalada Moscow waxayna eegayaan webiga Moscow. Iyada oo leh xarun metro, dukaameysi, xafiisyada, iyo meelaha cagaaran, ah Tower Evolution waa mid ka mid ah meelaha soo jiidashada badan ee Moscow.
Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedku waa mid maskax-fudud iyo cabsi gelin leh, samaynta Evolution mid ka mid ah meelaha ugu yaabka badan ee lagu booqdo Ruushka. Sidaas, Looma baahna in la yiraahdo dhismaha dhaadheer ee Ruushka wuxuu leeyahay sawirro badan oo safar ah oo adduunka ah waana isha lagu daydo naqshadeeyayaasha iyo injineerada adduunka oo dhan..
3. Dabaqadaha ugu Quruxda badan Adduunka oo dhan: Dhismaha Boqortooyada
Dhismaha xafiiska ugu caansan aduunka, dhismaha Empire State tan iyo 1931. Xaraashkii aadka u wanaagsanaa ee New York waxaa la dhisay 1920-meeyadii iyada oo loo tartamayey in lagu dhiso dhismayaasha dhaadheer ee ugu sarreeya adduunka.. Dhismaha Empire State Building wuxuu ku guuleystay tartanka markii naqshadeeyayaasha Raskob iyo Smith ay naqshadeeyeen dhisme heersare ah oo ka sarreeya cirka Manhattan 381 mitir.
Dhismaha Boqortooyada Boqortooyada waa mid ka mid ah meelaha ay tahay in la arko New York. Laga soo bilaabo dabaqa 38-aad, Waxaad si wadajir ah u soo dhaweyn kartaa qorrax ka soo baxa magaalada aan waligood seexan. Iyada oo leh aragtiyada Central Park, Waddada shanaad ee loo maro Times Square, Aragtida ka soo jeeda Dhismaha Boqortooyada waa lama ilaawaan.
4. Tower Shanghai
Dabaqa labaad ee ugu dheer aduunka, Tower Shanghai ayaa gaadhay 632 mitir. Ku maamulaya hawada sare ee Shanghai, Tower Shanghai waxay leedahay daawashada ugu sareysa aduunka oo bixisa aragtida Shanghai sanadka oo dhan.
Tilmaamo dheeraad ah oo gaar ah waxaa ka mid ah wejiga muraayadda, oo leh kor-wareeg, iyo mid ka mid ah sifooyinka ugu xiisaha badan waa meelaha cagaaran ee gudaha. Marka lagu daro naqshadaynta cagaaran, munaaradda waxaa loo qaabeeyey sidii magaalo dhexdeeda, hotel, goobaha tafaariiqda, xafiisyada, iyo goobaha martida ee dadweynaha. Tower Shanghai ma aha oo kaliya mid ka mid ah 10 dhismayaasha dhaadheer ee ugu quruxda badan aduunka, laakiin sidoo kale waa tan ugu weyn, oo leh awood uu ku qaabilo 16,000 dadka.
Maaraynta cirka Hong Kong, Dhismaha Bank of China waa mid ka mid ah dhismayaasha dhaadheer ee ugu yaabka badan Shiinaha. at 367 mitir, Tower Bank of China waa mid ka mid ah dhismayaasha dhaadheer ee adduunka oo dhan iyo dhismaha ugu caansan ee ku yaal bartamaha Hong Kong.. Iyada oo geeso fiiqan iyo naqshado saddex xagal ah oo dibedda ah, Bangiga Shiinaha ayaa ku ilaalin doona inaad daawato saacado dhamaadka ah.
Halka inta badan booqdayaasha Hong Kong ay u arkaan dhismahan mid gaar ah, waxaa jira qaar aan la dhicin. Sababtu waa sifada ka sooca BOC ka kale dhismayaasha quruxda badan Shiinaha. Cidhifyada fiiqan iyo X, waa calaamado taban oo ku jira Feng Shui. Si kastaba ha ahaatee, nasiib xumada xun ee suurtogalka ah kama joojinayso socotada inay ku qancaan quruxda dhismahan maalin kasta.
Mid ka mid ah 10 Dhismooyinka ugu quruxda badan adduunka, waa goob dalxiis. Marina Sands waxay wajahaysaa Marina Bay, leh makhaayado, casino a, masraxa, saddex daarood, waxaa ku xiran SkyPark dhererkeedu yahay 340 mitir. Intaa waxaa dheer, kakanaanta ugu yaabka badan waxay leedahay barkadda aan dhammaadka lahayn ee adduunka ugu sarreysa.
Naqshadeeye Moshe Safdie ayaa sharxay in nashqadeynta dabaqa sare uu dhiiri galiyay sagxadda kaararka. Waxaa jira aragtiyo la yaab leh oo Singapore laga soo bilaabo barkadda infinity, dabaqa 57aad. Intaa waxaa dheer, Waxaad u bogi kartaa dhismaha cajiibka ah ee Marina Bay Sands ee laga soo bilaabo Gardens by The Bay, meel kale oo qurux badan oo lagu booqdo Singapore.
7. Dabaqadaha ugu Quruxda badan Adduunka oo dhan: Tokyo Skytree
Iyadoo 2 sagxadaha daawashada, Dabaqadaha dhaadheer ee Tokyo Skytree waa mid ka mid ah shanta dhismo ee ugu dhaadheer adduunka. at 634 mitir, waxaad kafeega ka heli kartaa kafateeriyada ugu sareysa aduunka, oo leh aragtiyo yaab leh oo Tokyo ah. Skytree waxaa loo dhisay inay noqoto telefishan iyo munaarad warbaahineed ka dibna waxay noqotay mid ka mid ah calaamadaha ugu muhiimsan ee Tokyo.
Marka lagu daro sagxadaha indho-indheynta, iyo kafateeriyada, waxaad booqan kartaa aquarium iyo planetarium salkeeda. Dabaqadaha indho-indheynta ayaa bixiya 360 aragtiyada darajo ee magaalada ugu mustaqbalka iyo xiisaha badan ee Japan, iyo Aasiya. Sadarka hoose, u diyaar garow inaad maalin buuxda ku qaadato inaad u bogato aragtiyaha oo aad booqato tas-hiilaadka badan ee yaabka leh ee ku yaal dabaqa sare ee Skytree ee Tokyo.
Shiinaha waa isku dhafka xiisaha leh ee casriga ah iyo kuwa qadiimiga ah, halkaas oo macbudyo ku ag nool yihiin dhismooyinka dhaadheer ee daruuraha u kaca. Mid ka mid ah meelaha ugu fiican ee lagu booqdo Shiinaha waa Guangzhou iyo munaaradda astronomical Canton Tower. Xariifnimada 604 dhererka mitirka, Canton Tower ayaa laga arki karaa meel kasta oo Guangzhou ah.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu wanaagsan ee lagu sameeyo Canton Tower waa in kor loo qaado taraamka. Sidaas, haddii aadan ka cabsan meelaha dhaadheer, habeenkii kaalay, marka munaaradda lagu iftiimiyo midabyo qaanso roobaad oo dhalaalaya. Laga soo bilaabo combo taraamka ilaa tigidhka sagxada daawashada, Booqashada Tower-ka Canton waa waayo-aragnimo aad u fiican oo ka badan in la istaago saldhigga daanka la tuuray.
9. Dhismaha Caalamiga ah ee Liebian
Biyo-dhac-biyoodka ugu weyn ee ay dadku sameeyeen waa muuqaal qurux badan oo ka mid ah dhismooyinka ugu quruxda badan adduunka. Liebian International skyscraper waa 121 mitir dheer oo biyo-dhac ku leh wejiyadooda. Biyo-dhaca ugu dheer wuxuu quudiyaa afar bambooyin iyo roobka salkiisa. Waxaad arki kartaa dhismahan cajiibka ah safarkaaga Shiinaha, gaar ahaan Guiyang, Koonfur-galbeed ee Shiinaha.
Dabaqa sare ee Liebian waxaa laga yaabaa inuusan noqon kan ugu dheer adduunka, laakiin hubaal waa mid ka mid ah kuwa ugu sarreeya 5 Dhismooyinka ugu quruxda badan adduunka.
10. Dabaqadaha ugu Quruxda badan Adduunka oo dhan: Agbar Tower Barcelona
Torre Glories waa dhisme cajiib ah oo ka mid ah meelaha quruxda badan ee Barcelona. 38-da sheeko 144 mitirka dhaadheer waa abuurista naqshadeeyaha Faransiiska. Guryaha quruxda badan ayaa leh qaabka geyser-ka ee cirka u soo baxaya waxaana la nashqadeeyay ka dib buurta Montserrat. Markaad si dhow u eegto waxaad ogaan doontaa in wejiga oo dhan uu ka samaysan yahay muraayad.
Si kastaba ha ahaatee, Tower Agbar muuqaalkiisa ugu yaabka badan waa iftiinka midabka leh. Dabaqa sare ee Isbaanishka ayaa leh 4,500 Qalabka LED-ka. Qalabkan LED-ku waxay soo bandhigaan sawirro waxayna soo saari karaan 16 malaayiin midab. Waxaa intaa dheer, Haddii aad ku wareegto Tower Agbar waxaad ogaan doontaa tixraaca calaamad kale oo cajiib ah, Qoyska Sagrada ee Gaudi. Sidaas, mar kasta oo aad rabto inaad booqato dhismahan quruxda badan, diyaar u noqo inaad u bogato maalinta oo dhan.
halkan at Save A tareenka, Waan ku farxi doonaa inaan kaa caawino qorsheynta safarka 10 dhismayaasha dhaadheer ee ugu quruxda badan aduunka oo dhan tareen.
Ma doonaysaa in aad ku dhejiso boggaaga boggaga "10 ka ugu quruxda badan ee dhaadheer adduunka oo dhan"? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fmost-beautiful-skyscrapers-worldwide%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
Quruxda Skyscrapers Dhismayaasha ugu quruxda badan adduunka oo dhan Dhismooyinka ugu quruxda badan aduunka oo dhan Dabaqadaha dhaadheer munaaradda